नेपाली क्रिकेट अब कता ? - खेलकुद - साप्ताहिक
अब केही साताका लागि धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) ले नेपाली क्रिकेटको ध्यान खिच्ने छ । नेपालमा ट्वान्टी–२० क्रिकेटका दुई ठूला प्रतियोगिता भैरहेका छन्, एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) तथा डीपीएल । यी दुई प्रतियोगिता नहुँदा हुन् त नेपाली क्रिकेट शून्यको स्थितिमा झरिसक्थ्यो । यी दुई प्रतियोगिताले अहिले नेपाली क्रिकेटलाई जीवन्त राखेका छन् । अहिले नेपालको आधिकारिक निकाय क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) कोमाको स्थितिमा छ, अर्थात् त्यो निष्क्रिय छ । अर्को कुरा, क्यान अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) बाट निलम्बनमा परेको छ ।
डीपीएलको एउटा ठूलो विशेषता के हो भने यो मोफसलमा हुने प्रतियोगिता हो । अनि यो त्यही प्रतियोगिता हो, जसले नेपाली क्रिकेटलाई उम्दा युवा खेलाडी दिइरहेको छ, अन्यथा नेपाली क्रिकेट टिममा नयाँ अनुहार कहाँबाट आउन सक्थे र ? यी सबै प्रश्न किन पनि आवश्यक छ भने सबैले सोध्न चाहिरिहेका छन्, नेपाली क्रिकेट अब कता लाग्छ ? सबैलाई थाहा छ, निजी क्षेत्रले आयोजना गर्ने यी दुई प्रतियोगिताले मात्र समग्र देशको क्रिकेटलाई धान्न सक्ने छैनन् । न त त्यस्तो हुनु राम्रो नै हो ।
भर्खरै मात्र नेपालले आईसीसीबाट एकदिवसीय टिमको मान्यता पाएको छ । ट्वान्टी–२० क्रिकेटको विश्वकप खेलेयता एकदिवसीय टिमको मान्यता प्राप्त गर्नुलाई नेपाली क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । जिम्बावेमा भएको एकदिवसीय विश्वकप छनौटको शीर्ष आठ स्थानमा रहेर नेपालले उक्त उपलब्धि हात पारेको हो । अबको चार वर्ष नेपालसँग एकदिवसीय टिमको मान्यता रहनेछ ।
यो समय सीमा किन भन्दा नेपालले स्थायी रूपमा यो मान्यता पाएको होइन, चार वर्षका लागि मात्र हो । चार वर्षपछि यो मान्यता खोसिन सक्छ, जसरी यसअघि यस्तै मान्यता पाएका पपुवा न्युगिनी र हङकङले आफ्नो मान्यता गुमाएका थिए । त्यस्तो हुन नदिन के गर्नुपर्छ ? अहिले नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्ने सबै यही विश्लेषणमा व्यस्त छन् र धेरै नयाँ–नयाँ सम्भावना र सुझाव अगाडि आइरहेका छन् । खासमा नेपाली क्रिकेट अहिले निकै उत्साहित छ र उत्तिकै चिन्तित पनि ।
यसै क्रममा क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल (सीप्यान) पनि अगाडि आएको छ र उसले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै भनेको छ, नेपाली क्रिकेटलाई लिएर चिन्ता गर्नु पर्ने ठाउँ उत्तिकै छ । नेपाली क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकपछि अर्को सफलता हात पार्दा नेपालमा यो खेलको सर्वोच्च निकाय क्यान भने निलम्बनको स्थितिमा छ । यसबीच नेपालले जति पनि ठूला प्रतियोगिता खेल्यो, ती सबै आईसीसीकै खर्च र तयारीमा खेलेको थियो ।
सीप्यानसँग आवद्ध वर्तमान र पूर्व पाँच कप्तानले एउटै साझा मञ्चमा उभिएर भनेका छन्, समयमै नेपाली क्रिकेटले निकास नपाउने हो भने अहिले प्राप्त सफलताको कुनै अर्थ छैन, यी सबै उपलब्धि निरर्थक सावित हुन सक्छन् । यसरी नेपाली क्रिकेटको तीतो सत्य अगाडि सार्नेहरूमा वर्तमान कप्तान पारस खड्कादेखि लेखबहादुर क्षेत्री, पवन अग्रवाल, राजु खड्का तथा विनोद दास छन् । पारसले धेरै पटक दोहोर्‍याइसकेका छन्, ‘जसले क्रिकेट विवाद लम्ब्याइरहेका छन्, उनीहरूले आफ्नो हठ त्यागेर आईसीसीको निर्देशन मान्नुपर्छ ।’
पारसकै भाषामा नेपालले योजना बनाएर क्रिकेटलाई अघि बढाउने हो भने त्यो दिन पनि टाढा छैन, जति बेला नेपालसँग एकदिवसीय मात्र होइन, टेस्ट टिमको समेत मान्यता हुनेछ । खासमा नेपाली क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै बोर्ड नहुनु हो । बोर्ड नभएर नै कुनै योजना बनिरहेको छैन, प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । अब पनि बोर्ड नहुने हो भने नेपाली क्रिकेट अघि बढ्नुको साटो पछाडि धकेलिने निश्चित जस्तै छ ।
पूर्व कप्तान तथा अहिले प्रशिक्षकको भूमिकामा रहेका विनोद दासले पनि यही तथ्य दोहोर्‍याएका छन् । दास भन्छन्– ‘नेपाली क्रिकेटले अहिले प्राप्त गरेको सफलता उल्लेखनीय छ । यी सबै सफलता सीमित स्रोतका बाबजुद हात परेका हुन् । युवा टिमले मात्र होइन, सिनियर टिमबाट पनि राम्रा नतिजा आइरहेका छन्, तर क्रिकेटमा नीति–निर्माणको तहमा हाबी हुन चाहनेहरूबीच चुलिएको विवाद जहाँको त्यहीं छ, यसले छिट्टै निकास पाउन आवश्यक छ, अन्यथा नेपाली क्रिकेटको विकास रोकिन्छ र हामी पछाडि पर्छौ ।’
प्रत्येक खेललाई अघि बढाउन अधिकारसम्पन्न सर्वोच्च निकाय आवश्यक हुन्छ । दुर्भाग्य, नेपाली क्रिकेटसँग आफ्नो बोर्ड छैन । आईसीसीले क्यानलाई निलम्बन गरेको पनि धेरै भैसकेको छ । बोर्डकै अभावमा नियमित हुनु पर्ने क्रिकेट गतिविधि त रोकिएकै छन्, ठूला–ठूला महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । क्यान विवादलाई लिएर धेरै चर्चा भैसकेको छ । यो विवादका पछाडि कसको दोष छ, त्यो पनि सबैलाई थाहा छ, तैपनि यसको समाधान निस्कने छाँट छैन ।
आईसीसीले अन्तिम समय सीमा भनेर धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको दिन पनि बितिसकेको स्थिति छ । त्यसैले निलम्बनको स्थिति प्रतिबन्धमा जान सक्छ । यसबीच एउटा अर्को विकल्प पनि तयार छ र हुन सक्छ, ढिलो चाँडो नेपाली क्रिकेट त्यही स्वरूपमा जानेछ । त्यो विकल्प हो, नेपाली क्रिकेटलाई निजी क्षेत्रको हातमा दिने । अझ भन्ने हो भने यसलाई कर्पोरेट क्षेत्रको जिम्मा लगाउने ।
अमेरिकी क्रिकेटमा पनि यस्तै विवादमा थियो र ऊ पनि निलम्बन तथा प्रतिबन्धको स्थितिबाट गुज्रियो । यस्तोमा आईसीसीले अमेरिकी क्रिकेटको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दियो । अब यो ‘मोडल’ सम्भवत: नेपालमा पनि लागू हुनसक्छ । नेपालमा त्यस्तो निजी क्षेत्रको स्वरूप कस्तो हुनेछ, त्यो आईसीसीकै निर्णयमा भर पर्नेछ । नेपाली क्रिकेट निजी क्षेत्रको हातमा गयो भने त्यो कुनै व्यवसायिक संस्थाकै रूपमा परिवर्तन हुनेछ, जसको एक मात्र उद्देश्य अधिकतम लाभ हुनेछ अर्थात् धेरैभन्दा धेरै विकास ।
खुसी हुने बहाना पनि
विश्वकप छनौटबाट नेपालले एकदिवसीय टिमको मान्यता पाएपछि नेपाली क्रिकेटसँग खुसी हुने धेरै बहाना पनि छ । श्रीलंका र पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डले खुलेरै नेपाली क्रिकेटको प्रशंसा गरेका छन् । अझ इंग्ल्यान्डका पूर्व कप्तान माइकल भनले त नेपाल एकदिवसीय विश्वकपका लागि योग्य छ सम्म भनेका छन् । भन मात्र होइन, नेपाली क्रिकेटको प्रशंसा गर्ने अरु धेरै विदेशी पूर्व र वर्तमान क्रिकेटरहरू छन्, जसमा भारतका वीरेन्द्र सहवाग, महेन्द्रसिंह धोनीसम्म पर्छन् ।
अब एकदिवसीय टिमको मान्यता पाएपछि सबैभन्दा ठूलो योजना हुनुपर्छ— कुनै अर्को टिमसँग द्विपक्षीय सिरिज खेल्ने । यसका लागि धेरै टिम तयार पनि छन् । यसपटकको विश्वकप छनौट अफगानिस्तानले जितेको थियो । अफगानिस्तान आफैं नेपालमा आएर खेल्न तयार देखिन्छ । यस्तै स्थिति आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डको पनि छ । खासमा उनीहरू नेपालमा दर्शकले भरिभराउ क्रिकेट मैदान देखेर लोभिएका हुन् । धेरै देशमा दसौं हजार दर्शकका अगाडि क्रिकेट खेल्ने अवसर प्राप्त हुँदैन ।
प्रकाशित :चैत्र १८, २०७४
सकियो नेपालको झिनो आस
हङकङ नेपाली लगानी ग्रुप
करिश्मा : ए ! कता ?
पदक फिर्ता दिनुपरेपछि